Kugadzira Kugona - Beijing Grip Pipe Technology Co, Ltd.
About yedu kugadzirwa chinzvimbo
Beijing Grip Pipe Tech Kambani yakatemwa ine yakasimba yekugadzira inokwana, iyo fekitori yakakamurwa kuita masere makambani ekugadzira: jira simbi kugadzira, mechiniki kugadzirisa, kugadzirwa kweforoma, kugadzirwa kwerabha, isiri-yakajairika mehendi uye yemagetsi michina yekugadzira, chigadzirwa chigadzirwa, chigadzirwa kugadzirwa uye chigadzirwa kuyedza nevamwe.
Sheet simbi yekugadzirisa boka: Beijing Grip ine, kubva 20t kusvika 250t, ese marudzi ekutsika michina ndiro ndiro yekucheka michina, kukotamisa michina, nezvimwe.
Machining timu: Beijing Grip ine marudzi ese epamusoro-ekugadziriswa kwemachini nzvimbo, iyo yakanyanya kutenderera dhayamita iri 900mm, uye yakasimba yekunze kushandira pamwe kugadzirwa fekitori.
Mould kugadzira timu: kunyanya inokonzeresa dhizaini uye kugadzirwa kwemarudzi ese ejira simbi muforoma uye yerabha yekugadzira muforoma;
Rabha yekugadzira timu: gadzira ese marudzi emhando yepamusoro zvisimbiso, senge NBR, EPDM, silica gel, viton / FKM, nezvimwe
Isiri yemhando yemagetsi uye yemagetsi michina yekugadzira timu: inonyanya kukonzera iyo R&D uye kugadzirwa kwemuchina nemagetsi zvigadzirwa zvine zvakakosha izvo zvisingawanzo kushandiswa mumusika;
Chigadzirwa gungano timu: inoona gungano rezvakasiyana pombi yekubatanidza uye pombi zvinobatanidza;
Welding timu: Beijing Grip ine dzinoverengeka dzesimbi convex nzvimbo yekumonera michina, kusanganisira yakakwira-frequency kutenderera muchina, simba chengetedzo yekutengesa muchina uye AC yekutengesa muchina, kunyanya inokonzeresa iyo yekutengesa maitiro ezvigadzirwa;
Test timu: Beijing Grip ane ese marudzi ekumanikidza bvunzo michina, vibration bvunzo michina, kupomba bvunzo michina, ayo anoshandiswa zvisina kujairika chigadzirwa kuyedzwa uye zuva nezuva chigadzirwa mhando kuongorora.